यो सोनी Xperia Z5 को स्थिर शट मोड कसरी कार्य गर्दछ Androidsis
सोनीले फेरि नयाँ आईएफए बर्लिन वातावरणको फाइदा उठायो यसको नयाँ पुस्ता फ्ल्यागशिप प्रस्तुत गर्न। हामीले तपाईंलाई यसका सबै विवरणहरू देखाइसकेका छौं Sony Xperia Z5, Xperia Z5 कॉम्पैक्ट y सोनी एक्सपेरिया Z5 प्रीमियम, एक 4K स्क्रीन संग संस्करण। अब यो कुरा गर्ने समय हो सोनी Xperia Z5 क्यामेरा.
तपाईंलाई पहिले नै थाहा होला, निर्माताले २ 23 मेगापिक्सलको लेन्स आफ्नो Xperia Z उपकरणको नयाँ पिढीमा समाहित गरेको छ, र आज हामी तपाईंको लागि लेराउँदछौं। सोनी Xperia Z5 मा SdiyShot मोड को अपरेशन देखाउँदै भिडियो।
सोनी स्टेडीशटले उल्लेखनीय छवि स्थिरीकरण प्राप्त गर्दछ
SteadyShot मोड पहिलो पटक सोनी Xperia Z3 मा देखा पर्‍यो। यो प्रकार्यले अनुमति दिन्छ ध्यान दिएर छवि स्थिर जब एक भिडियो रेकर्ड, सबै चीज अधिक तरल पदार्थ र कम ठोकर संग देखिने बनाउँछ अब नयाँ पिढी सोनी Xperia Z5 को आगमन संग, जापानी निर्माता मा आफ्नो छवि स्थिरता प्रणाली उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
तपाईंले भिडियोमा देख्न सक्नुहुने रूपमा, तपाईंले यो चिन्नु पर्छ राम्रो काम सोनी। उनीहरूले स्टिडीशट मोडमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकेका छन् जुन अब अधिक प्रभावकारी छ र साँच्चै अचम्मका परिणामहरू प्राप्त गर्दछ।
तपाईं स्ट्याडीशट बीचको भिन्नताहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन सोनी एक्सपेरिया जेड3मा एकीकृत गरिएको थियो र फ्ल्यागशिपहरूको नयाँ पुस्तासँग प्राप्त उल्लेखनीय सुधार। हामीले प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ जबसम्म हामीसँग परीक्षण इकाई नभएसम्मका सबै रहस्यहरू निहार्न पर्दछ सोनी Xperia Z5 को शक्तिशाली क्यामेरा तर, देखीएको जस्तो देखिन्छ, यस्तो लाग्छ कि सोनीले यस सम्बन्धमा ठूलो काम हासिल गर्यो।
तपाईं सोनी Xperia Z5 को SteadyShot मोड को लाग्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » सोनी » यो सोनी Xperia Z5 को स्थिर शट मोड कसरी कार्य गर्दछ
प्रो सोनी भन्यो
धेरै उल्लेखनीय तरिकामा। यदि तपाइँ यसलाई Xperia Z3 सँग तुलना गर्नुहुन्छ ... त्यहाँ हरेक तरिकामा परिवर्तनहरू छन्।
SONY प्रो लाई जवाफ दिनुहोस्
हेनरी डी। नासिasing भन्यो
सोनीको लागि राम्रो छ, हुनसक्छ म Z1 कोम्प्याक्ट जेड,, कम्प्याक्ट वा प्रीमियम हाहा एक्सडीको लागि परिवर्तन गर्दछ
हेनरी डी। नासिasingलाई जवाफ दिनुहोस्
अल्काटेल वनटच एक्सस, हामीले अल्काटेलको १-इन्च ट्याब्लेट परीक्षण गरेका छौं